Ma waxaad raadineysaa degel aad ku barato Jarmalka? Sug, waxaad timid meeshii saxda ahayd! Tani waa barmaamijka waxbarasho ee ugu weyn Jarmalka ee almancax.
Boggeena internetka ee ah www.almancax.com, kuwa aan ku hadlin af-Jarmal kasta, waxay bartaan Jarmalka iyaga naftooda, kuwa doonaya inay horumariyaan afkooda Jarmalka, kuwa la shaqeeya iyo ardayda dugsiga sare waxay si fudud u bartaan Jarmalka oo ay u horumariyaan Jarmalkooda.
Degelkeennu wuxuu leeyahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay barashada Jarmalka. Casharo Jarmal ah oo muuqaal iyo qoraal ah, casharo Jarmal ah oo fiidiyow ah, Ciyaaraha ereyada Jarmalka, barnaamijyada barashada Jarmalka ee telefoonada android, fagaarayaasha Jarmalka iyo Jarmalka, adeegga turjumaada Jarmalka ee bilaashka ah, buugaagta Jarmalka iyo kumanaan casharro ah, dukumiintiyo iyo feylal aanan tirin karin, ayaa laga heli karaa bartayada.
Mawduucyo tusaale ah
Koorsooyin noocee ah ayaa laga heli karaa bartayada, waxaan si kooban ugu qornay qaar ka mid ah hoosta. Adigoo daalacanaya boggeena, waxaad ka heli kartaa casharo badan oo Jarmal ah waxaadna ku raaxeysan kartaa barashada Jarmalka khadka tooska ah ee kursigaaga. Mawduucyo tusaalooyin ah oo laga helayo qaar ka mid ah casharrada Jarmalka ee ku yaal boggayagu waa sidan soo socota.
Marka laga reebo casharada kor ku xusan, mowduucyadeena kale ee faa iidada u yeelan doona asxaabta baranaya Jarmalka waa sida soo socota. Waxaad ka heli kartaa wax intaa ka badan adoo daala dhacaya bartayada.
Cuntada Jarmalka Cabitaannada Jarmalka
Casharrada Jarmalka ee Fasalada 11 iyo 12
Casharrada Jarmalka ee Fasalka 10aad
Casharrada Jarmalka ee Fasalka 9aad
Codsiyada Is-galka Jarmal
Jarmalka iyo Isboortiyada Jarmalka
Jarmal ismin Halleri (Dhexdhexaad Der Deg ah)
Numbers Jarmalka, Tirooyinka Jarmalka, Tusaalayaasha Jumlada ah ee Jarmalka
Magaca Jarmalka-Hali (Jarmal Genitive) Sheeko Mawduuc
Warbixinta Cimilada Jarmalka
Jarmalka Artikeller Lecture, Jarmal Text
Waxbarashada kiisaska jarmalka (Akkusativ)
Lambarada Jarmalka iyo Numbers Jarmal
Jarmalka Gaarka ah ee Gaarka ah (Bestimmte Artikel)
Jarmal-ma Hali (Dativ) Faahfaahinta Mawduuca
Dhexgalka ku dhin Jarmalka
Hordhaca Jarmalka - Casharrada Naxwaha Jarmalka Aasaasiga ah iyo Jarmalka
Almancada Artikeller Meesha Isticmaalaan, Meesha aan Isticmaalin, Sida Loo Isticmaalayo
Jarmalka Shakhsiyeed iyo Shots
Magaca Jarmalka -i Hali (Jarmal Akkusativ) Mawduuca Mawduuca
Saacadaha Jarmalka Picture Description
Substantiv af Jarmal - Genitiv
Tirooyinka Jarmalka Per Square
Lambarro ilaa Jarmal 10a, Lambarrada Jarmalka ee Carruurta
Khudaarta Jarmalka (Sawir)
Jarmal ahaa ahaa ist das Kalıbı mawduuc
Tirinta tirooyinka Jarmalka, Ordinalzahlen
Lambarka Jarmalka (Sawir)
Jarmal Soo jiidashada cirbadaha sida ku xusan kiiskoodu (Baadhitaanka Daawada Adjektivs)
Magacyada Jarmalka Mawduuca Mawduuca (Dulqaad)
Sifooyinka Jarmal (Adjektiv-Deklination)
Jumladaha Jarmalka iyo Dhamaystirka Suuxinta
Jarmal aan la hubin Artikeller (Unbestimmte Artikel)
Magaca Jarmalka Magacyada Xayeysiiska Plural Rules
Jarmal Trennbare Verben (Falal Kala Duwan)
Marka laga reebo casharradeena Jarmalka ee kor ku xusan, waxaad ka heli kartaa kumanaan mowduucyo kale oo aad ku baran karto Jarmal websaydhkeenna iyo goleyaashayada.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku guulaysato noloshaada Jarmalka.
# Mawduucyo tusaale ah
Tags: casharada alman, sida loo barto jarmalka, barashada alman, goobta waxbarasho ee alman, barta waxbarista Jarmalka, casharrada alman ee netka ah, baro Jarmalka Jarmalka